को हुन् यी मेडलको खोला बगाउने अमेरिकन खेलाडी ? एउटै व्यक्तिको नाममा छ २५ वटा गोल्ड मेडल - Himali Patrika
को हुन् यी मेडलको खोला बगाउने अमेरिकन खेलाडी ? एउटै व्यक्तिको नाममा छ २५ वटा गोल्ड मेडल
हिमाली पत्रिका २४ साउन २०७८, 8:54 am
काठमाडौं । शुक्रबार जुलाई २३ तारिकबाट जापानमा सुरु भएको ३२औं गृष्मकालिन ओलम्पिक सुरुआज अगस्ट ८ तारिक आइतबारबाट समाप्त हुँदैछ। जापानले आयोजना गरेको यस ओलम्पिकमा सहभागी बन्नका लागि विश्वभरका ११ हजार खेलाडीहरुले सहभागी जनाएका छन् ।
अघिकंस खेलाडीले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै ओलम्पिकमा आफ्नो नाम लेखाउँदै आफ्नो देशका लागि इतिहास बनाइसकेका छन् ।ओलम्पिकमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेमध्ये कतिपय खेलाडी यस्ता हुन्छन्। जसको खेलप्रतिको योगदान संसारले भुल्न सक्दैन्। यस पटकको टोक्यो ओलम्पिकमा २४ वर्षीय अमेरिकी स्विमर केइलेब ड्रेसलले सबैभन्दा धेरै गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका छन्।
ड्रेसलले पुरुष १०० मिटर बटरफ्लाईमा एक गोल्ड, पुरुष १०० मिटर फ्री स्टाइलमा एक, पुरुष ४x १०० फ्री स्टाइल रिलेमा एक, पुरुष ४x १०० मेड्ली रिलेमा एक र पुरुष ५० मिटर फ्री स्टाइल स्विमिङ्गमा एक गरि कुल ५ वटा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्दै इतिहास रचेका छन्।
यस पटकको ओलम्पिक भन्दा पहिले अमेरिकी स्विमर माइकल फेल्प्स पनि रेकर्ड कायम गरेका थिए । उनी ओलम्पिकमा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन्। उनले २८ पदक जितेका छन्। ती २८ पदकमध्ये २३ स्वर्ण, तीन रजत र दुई काश्य पदक हुन्।
फेल्प्सले २००४ मा एथेन्समा सम्पन्न ओलम्पिकमा ६ स्वर्ण पदक जिते। साथै दुई काश्य पनि जितेका थिए। त्यसको चार वर्षपछि र उनले आठै प्रतियोगितामा गोल्ड मेडल जिते।
त्यसपछि, उनले लन्डनमा २०१२ मा भएको खेलमा थप चार गोल्ड मेडल जिते। दुई रजत पनि जिते। उनले २०१६ मा भएको पछिल्लो गृष्मकालिन ओलम्पिकमा पाँच स्वर्ण र एक रजत जित्दै रियो द जेनेरियोबाट ओलम्पिक केरियर अन्त्य गरे। त्यो ओलम्पिकसँगै उनी २८ पदकका विजेता हुन्। जुन विश्व कीर्तिमानसमेत हो।
लुरिसा लटुनिना : सर्वाधिक सफल महिला ओलम्पियन
फेल्पको सीधा पछि सर्वाधिक धेरै पदक जित्ने खेलाडीमा लुरिसा लटुनिना छिन्। उनले सबै खोलम्पिकमा गरि १८ मेडल जितेकी छन्। त्यो उनले १९५६ देखि १९६४ बीच जितेकी हुन्।
उनले अन्तिम ओलम्पिक टोक्योमै खेलेकी थिइन्। त्यसले उनलाई सर्बकालिन सर्वाधिक सफल महिला ओलम्पियन बनाएको छ।
उनले १९५६ को मेलबर्नमा भएको ओलम्पिकमा डेब्यू गर्दै पहिलो ६ पदक जितेकी थिएन्। उनले जिवनमा जितेका ९ स्वर्णमध्ये चार स्वर्ण, पाँच रजतमध्ये एक रजत र पाँच काश्यमत्तये एक काश्य त्यही ओलम्पिकमा जितेकी थिइन्।
त्यस्तै, चार वर्षपछि रोममा भएको ओलम्पिकमा उनले तीन स्वर्ण, दुई रजत र एक काश्यमा कब्जा जमाइन्। र, १९६४ मा टोक्योमा भएको पहिलो एसियाली ओलम्पिकमा उनले थप ६ पदक जितिन। त्यहाँ उनले दुई स्वर्ण, दुई रतज र दुई काश्य जितेकी थिइन्।
उता त्यसपछि १५ पदकको उपाधि भने दुई खेलाडीले साझा गरेका छन्। जहाँ नर्वेजियन स्टराइकर म्यारिट जोर्गेन र सोभियत जिमन्यास्ट निकाले एन्ड्रिनोभले साझा गरेका छन्।
त्यस्तै, चौथो स्थानमा समान १३ पदक जित्ने चार खेलाडी छन्। जहाँ नर्वेका ओले जोर्नडलेन, सोभियत संघका बोरिस शक्लिन, इटालीका इडुबर्डो मागिअरोट्टी र जापानी जिमन्यास्ट ताकाशी ओनो छन्। त्यसपछि १२ पदक जित्ने ९ खेलाडी छन्।